के यो वास्तवमै "सामाजिक" मिडिया हो? | Martech Zone
के यो वास्तवमै "सामाजिक" मिडिया हो?
मङ्गलबार, जुन 19, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मसँग friends 36 साथीहरू छन् फेसबुक, १२२ जडानहरू लिंक्डइनमा, १122 सदस्यहरू मेरोमा MyBlogLog समुदाय, MySpace मा एक दर्जन, याहू मा करीव 60 मित्रहरू! इन्स्ट्यान्ट मेसेन्जर, २० AOL इन्स्ट्यान्ट मेसेन्जरमा र पूरै 20 951 १ सम्पर्कहरू प्लाक्सो! म पनि छु राइज, MyColts.net, जाइकू, twitter र मैले एक दर्जन साथीहरूको ब्लगहरू पढें (collect०० वा यस्तै अन्य फिडहरू मध्ये मैले स collect्कलन र समीक्षा गरेको छु)।
मसँग तीन व्यक्ति ईन्टरनेट खाता छन् भनेर बताउन म अप्ठ्यारोमा छु ... एक होइन। मेरो फोन जडित छ, मेरो घर जडित छ, र मसँग स्टारबक्स र किनाराहरूबाट पहुँचको लागि टी-मोबाइल खाता छ (जहाँ म do वास्तवमा साथीहरूसँग भेट्नुहोस्)। मसँग पनि यो काममा छ, अवश्य। तपाईं हाँस्न सक्नुहुन्छ, तर सम्भावना यो छ कि तपाईं एक नै स्तरमा केही वर्षमा पनि वायर हुनुहुनेछ। यो केवल मेरो क्यारियर र शौक हुन्छ।
सबै सामाजिक मिडिया दिए म म एक हिस्सा हुँ, म वास्तवमै त्यो सामाजिक हो?
म अर्को दिन केही नाफा नकमाउने विपणन पेशेवरहरूसँग कुरा गरिरहेको थिएँ र मैले व्याख्या गर्ने प्रयास गरें दोस्रो जीवन तिनीहरूलाई। दोस्रो जीवन व्याख्या मिडिया मार्केटिंग पेशेवरहरु लाई प्रिन्ट गर्न कोशिस गर्नुहोस् र तपाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्न तर केहि चुकल र स्निकर पाउनुहोस्। अन्तमा कसैले भन्यो:
“यो मलाई त्यस्तो सामाजिक लाग्दैन। यो असामाजिक लाग्दछ। "
व्यक्तिगत नोट: दोस्रो जीवन निश्चित रूपले उबेर-गीकोडमको स्तर हो जुन मैले प्राप्त गर्न कोशिस गरिरहेको छैन। मेरो दोस्रो जीवनमा काम गर्ने भन्दा मेरो पहिलो जीवनसँग पर्याप्त चुनौतिहरू छन्।
मलाई लाग्छ उनी मरिसकेकी थिइन। यो कुनै सामाजिक होइन। सामाजिक हेर्नको लागि, पढ्नु वा सुन्नु भन्दा बढी आवश्यक पर्दछ ... त्यहाँ व्यक्तिको शरीर भाषा, आकर्षण, स्पर्श, गन्ध ... पहिचान गर्दै केवल तिनीहरूको आँखामा हेर्दै।
कहिलेकाँही जब म मेरो काममा गहिरो संलग्न हुन्छु, मेरी छोरी मेरो पछाडि कम्प्यूटरमा छिर्नेछ (शाब्दिक feet फिट टाढा) र IM म ... "हाय बुबा! lol "(उनी १ 13 वर्षकी)। म सामान्यतया फर्कन्छु र हाँस्न थाल्छु ... यसको मतलब यो हो कि म कम्प्युटरमा निकै समय आएको हुँ र मनिटरबाट टाढा समय खर्च गर्नु पर्छ। धन्यबाद, उनी आफैं मेरो कुर्सी तर्फ फैलिएकी र हेकलाई मबाट बाहिर लैजान सम्म म ल्यापटपबाट टाढा भएसम्म। म भाग्यमानी छु जसले मेरो बारेमा पर्याप्त चासो राख्छ त्यो गर्न।
2000,aबाँदरले इन्टरनेट मार्फत हात नियन्त्रण गर्‍यो। अब एक स्टार्टअप पनि छ, भनिन्छ न्यूमेन्टा, जुन मानव बुद्धिसँग कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई मिलाउन काम गरिरहेको छ।
यसले मलाई पहिलो स्टार ट्रेक एपिसोडमा टेलोसियन्सको सम्झना गराउन सुरू गरिरहेको छ। तिनीहरू ठूला बोसो टाउकाका कुरूप मित्रहरू थिए जुन मानिसहरूलाई टेलिपेथिक ढ ill्गले भ्रम सिर्जना गरेर मान्छेलाई बन्दी बनाए। (मलाई भन्नुहोस् तपाईंलाई त्यो याद छ प्रकरण, "The Cage"। यो पूर्व शटनर पनि थियो! NBC मा सब भन्दा महँगो पाइलट)।
हामी केवल काममा जडान हुने गर्थ्यौं, त्यसपछि घरमा, अब हाम्रो सेलफोनहरूमा ... मस्तिष्क वास्तवमै अर्को छेउछ? के हामी पनि ईन्टरनेट बाहिर जीवन को कुनै पनि प्रकारको छ? यो प्रकारको डरलाग्दो भइरहेको छ, होइन र?
हो, यदि हामी मस्तिष्क मार्फत इन्टरनेटमा जडान गर्न सक्छौं भने, सोच्नुहोस् हामी कसरी कोड लेख्न सक्छौं र प्रयोग गर्न सक्दछौं। म विकासकर्ता फार्म निर्माण गर्न सक्दछ कफिमा पाइप गरिएको साथ र पेट ट्यूबहरू मार्फत पिसाएको पिज्जाको साथ एक बिन्दु पाँच जीवन। (कहिँ पहिलो र दोस्रो जीवन बीच)।
मलाई धेरै सामाजिक लाग्दैन। मैले अझ बाहिर निकाल्नु पर्छ।
PS: तपाइँलाई के लाग्छ कि ब्रेन 'नेट खाता चल्नेछ?
त्यो आईफोन लिनुहोस्!
जुन 19, 2007 मा 9: 36 PM
के यो तपाईंलाई बताउनको लागि नराम्रो समय हो कि तपाईंले शुक्रबार राति द लनमा एउटा ठूलो कन्सर्ट छुटाउनुभयो, वा तपाईंको उपस्थिति छुटेको सम्झाउने राम्रो समय हो? तपाइँको सामयिक अनप्लग संग शुभकामना। यसले मलाई धेरै, धेरै राम्रोसँग सेवा गरेको छ। मसँग थोरै ज्ञान हुन सक्छ तर म निश्चित रूपमा मानिसहरूसँग बढी जोडिएको महसुस गर्छु।
जुन 19, 2007 मा 10: 00 PM
शुक्रबार कन्सर्ट छुटेकोले निश्चित रूपमा यो पोस्टलाई प्रेरित गर्यो, जुली! 🙂
जुन 20, 2007 मा 3: 40 PM
समय समयमा आफ्नो फोन स्विच अफ गर्नुहोस्।
समय समयमा इमेल बन्द गर्नुहोस्।
हिमाल, जंगल र समुद्र हेर्न जानुहोस्!
दोस्रो जीवनको लागि आवश्यक छैन, होइन, thx!
मसँग पर्याप्त प्रविधि छ पहिलो जीवन अहिले! 🙂